Kuchengetwa kweVatengi: Statistics, Maitiro, uye Kuverenga (CRR vs DRR) | Martech Zone
Isu tinogovana zvishoma nezve kutora asi zvisina kukwana nezve kuchengetwa kwevatengi. Matanho makuru ekushambadzira haasi akareruka sekutyaira more and more lead, ndezvezve kutyaira kwakakodzera mafambiro. Kuchengeta vatengi kunogara kuri chikamu chemutengo wekutora matsva.
Nedenda, makambani akavhunduka pasi uye anga asiri ehasha pakuwana zvigadzirwa zvitsva nemasevhisi. Pamusoro pezvo, musangano we-mu-munhu wekutengesa uye misangano yekushambadzira zvakakanganisa zvakanyanya nzira dzekuwana kumakambani mazhinji. Isu patakatendeukira kumisangano chaiyo uye zviitiko, kugona kwemakambani mazhinji kutyaira kutengesa kutsva kwaive kwakasimba nechando. Izvi zvaireva kuti kusimbisa hukama kana kunyange kusimudzira vatengi varipo kwaive kwakakosha kuchengetedza mari ichienda uye nekambani yavo ichikwira.
Hutungamiri mumasangano ekukura-pamusoro vakamanikidzwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kwevatengi kana mikana yekutenga ikadzikira. Ini ndaizeza kutaura kuti aive akanaka mashoko… chakazove chidzidzo chinorwadza pachena kumasangano mazhinji kuti vaifanira kumisidzana nekusimbisa nzira dzekuchengetedza vatengi.
Kwevatengi Kuchengeta Statistics
Kune akawanda asingaonekwe emitengo anouya nehurombo hwekuchengetedza vatengi Heano mamwe manhamba-ekumira kunze anofanirwa kuwedzera yako tarisiro pakuchengetwa kwevatengi:
67% ye kudzorera vatengi vanopedza yakawanda mugore ravo rechitatu rekutenga kubva kubhizinesi kupfuura mumwedzi yavo mitanhatu yekutanga.
Nekuwedzera chiyero chako chekuchengetedza vatengi ne5%, makambani anogona wedzera purofiti ne25 kusvika 95%.
82% emakambani anobvumirana nazvo kuchengetwa kwevatengi kunodhura zvishoma pane kutenga vatengi.
68% yevatengi havazodzokere kubhizinesi mushure mekuve ne chiitiko chakaipa navo.
62% yevatengi vanonzwa mabhureki avanonyanya kuvimbika kwavari kuita asiri kuita zvakakwana mubayiro wevatengi kuvimbika.
62% yevatengi veUS vakatamira kune rakasiyana brand mugore rapfuura nekuda kwe murombo ruzivo rwevatengi.
Kuverenga Kuchengeta Mutengo (Mutengi uye Dhora)
Havasi vese vatengi vanoshandisa yakaenzana mari pamwe nekambani yako, saka kune nzira mbiri dzekuverenga mitengo yekuchengetedza:
Mutengo Wekuchengetedza Kwevatengi (CRR) - iyo chikamu chevatengi iwe chaunochengeta chakanangana nenhamba yawaive nayo pakutanga kwenguva (kwete kuverenga vatengi vatsva).
Dhora rekuchengetedza Mutengo (DRR) - iyo chikamu chemari yaunochengeta ichienderana nemari yawaive nayo pakutanga kwenguva (kwete kuverenga mari nyowani). Nzira yekuverenga izvi kupatsanura vatengi vako nenhamba yemari, wozoverenga iyo CRR padanho rega rega.
Makambani mazhinji ayo anobatsira kwazvo anogona kuva nawo yakaderera mutengi chengetedzo asi yakakwira madhora ekuchengetedza sezvavanoshandura kubva kuzvibvumirano zvidiki kuenda kuzvibvumirano zvakakura. Pakazara, kambani ine hutano uye inobatsira zvakanyanya kunyangwe ichirasikirwa nevatengi vadiki vatengi.
Yekupedzisira Nongedzo kune Vatengi Kuchengetwa
Iyi infographic kubva M2 Yakabata ruzivo rwekuchengetwa kwevatengi manhamba, nei makambani achirasikirwa nevatengi, maitiro ekuverenga mutero wekuchengetedza vatengi (CRR), Maitiro ekuverenga chiyero chedhora (DRR), pamwe nekutsanangura nzira dzekuchengetedza vatengi vako:
Zvinoshamisa - kushamisika vatengi nezvipo zvisingatarisirwi kana kunyorwa neruoko.
Zvatinotarisira - vatengi vakaodzwa mwoyo kazhinji vanouya kubva pakuisa zvinotarisirwa zvisingaiti.
Kugutsikana - tarisa kiyi yekuita zviratidzo zvinopa ruzivo rwekuti vagutsikane sei vatengi vako.
Feedback - bvunza mhinduro yekuti yako ruzivo rwevatengi ingavandudzwe sei uye nekushandisa iwo mhinduro dzine simba rakakura.
Kurukura - ramba uchitaurirana kuvandudza kwako uye kukosha kwaunounza ako vatengi nekufamba kwenguva.
Kungogutsa vatengi hakuzove kwakakwana kuti vawane kuvimbika kwavo. Panzvimbo iyoyo, ivo vanofanirwa kuve nebasa rakasarudzika rakakodzera bhizinesi ravo rekudzokorora uye kuendesa. Nzwisisa zvinhu zvinotyaira ino shanduko yevatengi.
Rick Tate, Munyori we Iyo Service Pro: Kugadzira Zvirinani, nekukurumidza, uye Akasiyana Mutengi
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Amazon yakabatana link yeRick Tate's bhuku.
Tags: crrvatengi vanozivakuvimbika kwemutengikuchengetwa kwevatengimutero wekuchengetedza vatengikugutsikana kwevatengiMabatiro evatengidhora rekuchengetedza mweroDrrm2 yakabatakuchengetwapasocial media kuwanaNei Vatengi Vachibva
Aug 29, 2013 na12:52 PM
Aug 29, 2013 na10:56 PM
Crisp yakajeka! Kukurukurirana kwevatengi kunoita basa rakakosha mukuita kwevatengi nebhizinesi.